Dhakhaatiirta gobolka Sool oo sheegtay in cudurka Jadeecadu ka jiro deegaanka.
Laascaanood 12 Apr, 2012Hawl wadeenada caafimaadka gobolka Sool ayaa sheegay inay jiraan tiro isa soo taraysa oo cudurka jadeecada uu soo ridanayo, iyagoona bulshada uga digay xiligaan inay wanaajistaan hanaankooda saxada iyo nadaafadda, iyadoo lagu jiro wakhti kulayl badani jiro lana suugayo roobabkii gu’ga.Dr. Muuse Geele ooka tirsan dhakhaatiirta magaalada Laascaanood ayaa Radio Ergo u sheegay inay jiraan carruur u jiifta jadeecada isbitaalka, isagoo dhakhtarkaani ka hadlayey kulan lagu qabtay magaalada Laascaanood oo looga hadlayey cuduradda faafa iyo dar dar gelinta talaalka dabaysha oo ay soo qaban qaabiyeen hay’addaha UNICEF iyo WHO.
Faarax Cawil oo ka mid ah isna saraakiisha UNICEF ayaa sheegay inay quud daraynayaan sidii ay uga hawli geli lahaayeen dhamaan degmooyinka iyo tuulooyinka gobolka Soola ayna hadda u qaybiyeen hawl wadeeno fulinaya talaalka cudurka Dabaysha.
Xiliyadaan ayaa badanaa waxaa is bedela cimiladda iyadoo ay bilowdaan roobabkii gu’ga, waxaana inta badan dilaaca cudurada ay ka midka yihiin shubanka, jadeecada iyo oof wareenka oo carruurta haleela, waxayna hawl wadeenada caafimaadku dadka ku booriyaan xiliyadaan inay ilaaliyaan hanaankooda nadaafadeed iyo saxada kuwaasoo qayb muhiim ah ka qaata ka hortigista cuduro wax laga qaban karo oo dila maalin kasta boqolaal carruur ah.
10 qof oo shuban-biyood ugu geeriyootay Xudur
Tuulooyin ka tirsan Gaalkacayo oo ay ka jiraan adeeg la'aan caafimaad
Haweenka ku nool qoryooleey oo sheegay in xaaladooda caafimaad ay wax iska badaleen
Jadeeco ka dilaacday miyiga Baladweyne
Cudurka Daacuunka oo la xaqiijiyey inuu ka jiro degmada Jowhar
Haween dhiigbax ugu geeriyooday Hoosingow
34 qof oo cudurka jadeecada ugu geeriyootay Shabeellaha Dhexe
Sheekadda Khadra Axmed oo ah hooyo qabta cudurka isu furanka